Iyo 4 P's Yemazuva Ekutsvaga Injini Kugadziridza | Martech Zone
Iyo 4 P's Yemazuva Ekutsvaga Injini Kugadziridza
China, August 18, 2016 Muvhuro, Nyamavhuvhu 22, 2016 Douglas Karr
Nyika yeSEO iri kuzunza zvishoma panhau idzo Moz iri kucheka vashandi vayo nepakati. Ivo vanotaura kuti ivo vari kupetwa pasi pasi neyakagadziridzwa yekutarisa pakutsvaga. Ivo vanga vari piyona uye akakosha mudiwa mune iyo SEO indasitiri kwemakore ikozvino.
Maonero angu haasi tariro yeOrganic Search indasitiri, uye ini handina chokwadi chekuti Moz inofanirwa pasi pasi. Ipo Google ichienderera mberi nekuvaka mhedzisiro uye nemhedzisiro yemhando kuburikidza nehungwaru hwekunyepedzera uye zvakagadziridzwa algorithms, izvo zvinodiwa zvekuhaya vanachipangamazano uye vashandi vari kuenda. Uye SEO zvishandiso dziri kubuda vhiki rega rega dzinokwikwidza nezvinodiwa neMoz.
Makore mashanu apfuura, mazhinji edu kushambadzira kubvunza kuedza kwakapihwa kune SEO. Isu tanga tine yedu yega SEO muongorori. Tungamira makore mashanu uye isu tinoshandisa zvakanakisa maturusi kubva kumutsigiri wedu pa gShift izvo zvinopa nzwisiso mukati medu wese huvepo hwewebhu, kwete kwedu chete kwehupenyu hwekutsvaga. Yakasanganiswa ne analytics uye varidzi vewebhu, gShift mhinduro inotibatsira kuongorora edu omnichannel kushambadzira kuyedza, kusanganisira organic performance, mukuwedzera pakufurira kwekutsvagisa, kuwanikwa kwemukati, kuongorora mhando, uye zvimwe zvakawanda.
SEO haisisiri indasitiri zvakare; chikamu cheindasitiri. Icho chimiro mupuratifomu. Iri zano mukati medhi yedhijitari yekutengesa. Inodikanwa ruzivo kune wega mushambadzi, kwete yayo pachinzvimbo. Wese mushambadzi anofanirwa kunzwisisa maitiro ekuwedzera enjini dzekutsvaga mukati mehurongwa hwese uye anzwisise pazvinokodzera pasnichannel yenyika yedu. Kwenguva refu, isu takaona seSEO makambani uye mapuratifomu akapotsa chikepe pane shanduko yekugadzirisa, kunyora kwakakura zvemukati, uye kusimudzira zvinotungamira kuburikidza nekushandurwa. Kwenguva yakareba kwazvo, iyo SEO indasitiri yanga iri nezve backlinks, mazwi akakosha, uye chinzvimbo apo vatengi uye injini dzekutsvaga dzakasimukira.
Nyanzvi hadziwirirane neni, asi isu tine mazana evatengi vari kubudirira nekutarisisa kwedu. Tichiri kuona kuti nzvimbo dzevatengi vedu dzakavakwa maererano nezano reGoogle uye isu tichiramba tichiongorora chinzvimbo, hakusi iko kwatinoisa kuwanda kwekuedza kwedu zvekare. Ndiri kwete achiti SEO iri hazvina basa, ichiri nzira yekutanga yekutora. Ndiri kuti kudyara muSEO hakuzowana kudzoka kwemamwe marongero. Aya marongero kusimudzira kwenzanga, kukwidziridzwa kwakabhadharwa, kudyidzana neruzhinji uye kuvaka raibhurari yemukati yezvinyorwa.
Kukurudzira Kwemagariro - Yako tarisiro nevatengi havasi kushanyira yako saiti kazhinji. Nekudaro, ivo vari kuita zvemagariro. Kuti ubatanidze pane ako tarisiro nevatengi, iwe unofanirwa kunge uchisimudzira zvirimo zvako kwavari. Izvo zvemagariro enhau zvinotaurwa zvinowanzosvika kune vateereri vatsva, vanozotikurukura online, vachivaka yedu yekutsvaga yekutsvaga masimba.
Kubhadharwa Kukwidziridzwa - Kunyange isu tichida WOM uye kugoverana kwehutachiona yezviri mukati kuti tiwedzere kusvika kwemabrands edu, chokwadi chiri nyore ndechekuti kushambadzira izambuko ratinofanira kuisa mari kuti tiwedzere iko kusvika. Iwo mikana yakabhadharwa kazhinji inosvika kune vateereri vatsva, avo vanobva vataurirana nesu online, vachivaka yedu organic yekutsvaga chiremera.
Public Relations - Kuva nechikwata chevashandi vanotsvaga mikana yekushambadzira yako mhando uye tarenda remukati inofanirwa. Iwo zvinyorwa kubva kune akakodzera zvinyorwa, kubvunzurudzwa pane podcast, uye mikana yekutaura yatinowana kuburikidza neyedu PR timu yakagadzira inoenderana, yepamusoro masimba inotaura izvo zvinotipa isu kutsvaga chiremera.
Premier Zvemukati Raibhurari - Zvegreen zvirimo hazvisi kubatsira chero wevatengi vedu zvekare. Dzakakwana zvinyorwa pamwe nekutsvagisa, dhizaini, zvakadzama zvemukati, infographics, uye chena mapepa ari kuwana zvakanyanya kuwanda. Panzvimbo pekuisa pfungwa pane zvigadzirwa zvemukati, isu takanangana nekuvaka yakakwana, yakazara yezvinyorwa raibhurari kune yega yevatengi vedu.
Pane zvakasarudzika here? Ehe saizvozvo. Vagadziri vezvigadzirwa zvemabhizimusi mumaindasitiri anokwikwidza zvakanyanya vanogona kuwana mukana chaiwo ne Tsvaga Engine Optimization. Wedzera zvakapindirwa nemamirioni emapeji uye pachave nekudzoka kukuru pane kudyara. Asi iwo makambani ndiwo anosarudzika, kwete mutemo. Mazhinji emabhizinesi angave zvirinani kubva pakuwedzera kudyara pane aya mana ari pamusoro.
Tags: backlinkingmazwi akadzamamozkubhadhara kubhadharwapremier zvemukatipremier kugadzirwa kwemukatihukama hwevanhuseokusimudzira munharaundachena bepaWhitepaper
Zvishoma: Zvemukati Kuburitsa Ongororo Yakaitwa Zvakarurama
Sep 7, 2016 na1: 58 PM
Pfupiso inonakidza, ndatenda.